बेनी अस्पतालमा १६ महिने मेरो कार्यकाल - Myagdi Online
म्याग्दी/ २०७३ फागुन २४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मेरो बेनी अस्पतालको अध्यक्षयमा नियुक्ती भयो । लामो समय रिक्त रहेको उक्त पद मैले बहाली गर्दा चुनौतिपूर्ण थियो । सो चुनौति सामना गर्न अस्पतालको आफ्नै मिसन “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिवद्धता” का साथ अस्पताल टिम मेरो नेतृत्वमा अगाडि बढ्यौ । सेवा विस्तारका कुरामा, गुणस्तरको विषयमा, मेडिकल सरसामानको व्यवस्थापन विषयमा समन्वयकारी भुमिका मेरो कार्यकाल ऐतिहासिक एवं उत्कृष्ट भएको भन्ने मेरो अनुभुति छ । अस्पतालमा सेवाग्राही आम नागरिक यसका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । निश्चित योजना तथा कामको प्रथामिकता नगरेको भए हाम्रो लक्ष्य निश्चित पुरा हुने थिएन । त्यसैले यो कार्यकाल चुनौतिपूर्ण र कठिन थियो । मुख्य चुनौतिहरु निम्न थिए ।
तर यस्को वैकल्पिक उपाय बारे कुनै तयारी थिएन । Indoor मा रहेका विरामी हरुलाई एउटा ठुलो पालको व्यवस्था गरिएको थियो । जहाँ विरामीको वेड राखी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
यस सम्बन्धमा बेनी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.रोशन न्यौपानेको सल्लाह सुझाव र अनुभव ,दक्षता मलाई काम गर्ने हौसला र प्रेरणा मिल्यो । साथै साविकको सेवा लाई निरन्तरता दिन क्लिनिकल को.अर्डिनेटर डा. धिरेन मल्लको सल्लाह र सहयोग पनि स्मरण गर्न चाहान्छु । सवै सेवाहरु सुचारु राख्दै ५० वेडको अस्पतालको निर्माण कार्य पनि अघि वढ्यो ।
अन्तरंत कक्ष Indoor को व्यवस्थापनका लािग नयाँ नक्सा ल.ई. गरी विकास समितिको तर्फबाट भएपनि अस्थायी भवन निर्माण गर्ने विकास समितिको वैठकबाट निर्णय गरियो । तर तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा सगँ पनि सम्र्पक गरि यहा्रँको अवस्था जानकारी गराइ आवश्यक वजेटको माग राखे । मन्त्रालय र विभागियमा डा.रोशन न्यौपाने निरन्तर सम्पर्कमा रहनु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रु १,१०,००००० (अक्षरुपी रु एक करोड दश लाख ) रुपैया निकासा आयो । भवनको टेण्डर भई स्वीकृत हुने अवस्था सम्म आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को अन्तिम भइसकेको थियो । ठेकेदारले काम गर्दै जादाँ सम्पन्न हुन नसकेपछि रकम फ्रिज भयो । भवन बनाउनै पर्ने थियो र कामलाई निरन्तरता दिइयो । स्वास्थ्य सेवा विभागमा अस्पतालको MSS न्युनतम सेवा मादण्डबाट बेनी अस्पताल उत्कृष्ट अस्पतालको घोषण भएपछि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रभावित हुनुभयो र केही रकम निकासा दिने आश्वासन पनि दिनु भयो ,हाम्रो हौसला बढ्यो । डा.रोशन न्यौपानेको सक्रियता र निरन्तर सहयोगको कारण बाट बजेट निकासा भई गत वर्ष को विभिन्न कार्यलाई निरन्तरता दिइयो र Indoor भवन X–ray ,SCU भवन निर्माणकार्य सम्पन्न भई पहिलो भन्दा राम्रो सेवा दिने व्यवस्था गरियो । इमरजेन्सी सेवाका लािग पुरानो जनस्वास्थ्य र स्टोर भवन मर्मत गरी सेवा प्रदान गरिएको छ ।
भवनबाट जनस्वाथ्य कार्यालयको भवनको सभाहल लगायतका अन्य कोठमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । ति दिन अस्पतलाका लािग बडो कठिन ,समस्यामुलक र चुनौतिका दिन थिए । हाइड्रोसिल ,हर्निया ,सुत्केरी लगायतको सल्यक्रिया गरिएका विरामी हरुलाई हालको अपरेशन थिएटरबाट रातीको समयमा पनि माथि सम्म वोकेर लगेर सेवा दिनु पर्दथ्यो । यस बाहेक अस्पतालको मौजुदा तालिम कक्षमा OPD,भिडियो एक्सरे सेवा दिने व्यवस्था मिलाइयो भने ३०० MA को अत्याधुनिक एक्सरे सेवा प्रदान गर्न उक्त मेशिनको लागि आवश्यक मापदण्डको कक्ष अस्थायी संरचानामा तयार गरिएको छ । यरी अस्पताल विकास समितिका सम्पुर्ण सदस्य साथीहरुको रचनात्मक भावना र सुझाव र सहयोग बाट अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लेखा अधिकृत स्टोर र प्रशासनका साथीहरु निसंकोच सहयोग बाट अव नयाँ अस्पताल निर्माण नहुन्जेल सम्म सेवालाई निरन्तरता र स्तरीयता दिन सहज हुनेछ ।
ग्रीन वैकमा ८० लाख रुपैया शून्य प्रतिशत व्याजमा राखिएकोमा वैकसगँ सेवा सम्र्पक गरी १० प्रतिशत व्याज नदिने भए अन्य वैकं सगँ कारोबार गर्ने कुरा राखेपछि १० प्रतिशत व्याजमा वचत खाता बाट आउने व्यवस्था मिलाईयो । सथै उक्त व्याजदरमा हाल बद्लिदो परिस्थितिमा घटबड भै रहन्छ तर शून्य प्रतिशत भएको छैन । वचतमा रहेको रकम मध्य ३५ लाख १३ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रिन विकास वैंक मुद्यतीमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने २५ लाख पुन ः मुद्दतीमा राख्ने निर्णय भएको छ । मेरो बहालीको अवस्थामा ग्रिन विकास वंैकको वचत खाता वाहेक बेनी वचत , नेपाल वैंक लिमिटेड , गरिमा विकास वैंकमा गरि एक करोड पन्ध्र लाख थियो भने नयाँ अस्थायी संरचना निर्माणमा रु वीस लाख खर्च गर्दा पनि ०७५ आषढ मसान्त सम्म रु एक करोड त्रीपन्न लाख अस्पताल विकास समितिको खातामा मौजुदा छ । बेनी अस्पताल सरहका कुनै अस्पतालमा रकम मौजुदा छैन । ०७३ चैत्र देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सेवा वापत कुनै शुल्कको वृद्धि गरिएको छैन तर EHS वापत लिइदै आएको रु ३५० लाई घटाई रु ३०० बनाइएको छ ।
 सबै सेवालाई सुचारु ग्र्न ठाँउठाँउमा इनभर्टर र Solar बिच को व्यवस्था गरिएको छ।
 सुत्केरीको सालनाल व्यवस्थापनको लागि एबि Placenta Pit र फोहोर व्यवस्थापनको लािग इन्सिनेटर को निर्माण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा भएका ५ वटा ३०० MAको X-Ray मेसिन मध्ये हाम्रो सम्पर्क र समन्वय तथा हाम्रो उत्कृष्ट सेवाका आधार देखाई एउटा ३०० ःब् को ह्(च्बथ मेसिन बेनी अस्पतालमा ल्याउन सफल भयौँ र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिआएका छौ ।
आफनै श्रोतबाट CARM खरिद गरी सेवा दिने निर्णय गरिएकोमा डा.रोशन न्यौपानेको सत्प्रयासबाट विभाग बाट ल्याई हाडजोर्नीको सेवा प्रदान गरिदै आएको छ ।
क्रायो र VIA सेवा शूरु गरी महिलाहरुको पाठेघरमा हुने क्यान्सरको उपचार गर्न सुरुवात गरिएको छ ।
विमा सेवा लाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई अस्पताल समयमा आफ्नो Identify हुने पोषाक लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्टोर धुलाई गरी खाली भएको कोठामा MCH र खोप सेवा लाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको न्युनतम सेवा मापदण्डको आधारमा गरेको मुल्याङकन मा नेपालकै उत्कृष्ठ अस्पतालको ठहर भएको छ ।
प्रदेश नं ४ को उत्कृष्ट जिल्ला स्वास्थ्य सुचाङ्क अस्पताल भएकाले डा.रोशन न्यौपानेले ४ नं प्रदेश बाट प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ ।
 अष्ट्रलियामा कार्यरत मेरा मित्र माधव सुबेदी सगँको निरन्तर सम्र्पकमा रहेको कारण उहाँको सहयोगमा मुगौला उपचारका लािग चाहिने र २ थान डाइलोसिस मेसिन प्राप्त भएको । उक्त मेसिनका लािग चाहिने RO डाइलासिसको Filtration Plant एबिलत डा.रोशन न्यौपानेकै सक्रियतामा निः शुल्क प्राप्त भएको छ ।
 यसरी नयाँ सेवा सुरुवातका लािग सहयोग गर्नु हुने भित्र तथा Rotary Club लाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
 नेपाल मगर संघ इजरायलबाट प्राप्त रु १ लाख वरावरको मेडिकल औजार उपकरण खरिद भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहुने संस्था लाई मुरी मुरी धन्यवाद । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग र NSI जसबाट अस्पताललाई यो स्तरमा पु¥याउन हरपल सहयोग प्राप्त भयो जसलाई धन्यावद ज्ञापन गर्दछु ।
 डेन्टल सेवाका लागि Dental X-ray र थप Dental Chair को व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा मेरो १६ महिने कार्यकाल अस्पतालका प्रमुख ,स्वास्थ्यकर्मी ,प्रशासन लेखा, स्टोर लगायतको समुहका कर्मचारीसाथीहरु बाट प्राप्त सहयोग अविस्मरणीय छ । साथै सवै अस्पताल विकास समितिका साथीहरु र मेरा राजनितिक साथीहरु को सहयोग , सल्लाह र सुझाव अविस्मरणिय छ । धमिलो पानिमा माछा मार्न प्रयास पनि नभएको होइन सत्य त सत्य नै हुन्छ । विशेषत मन्त्रालय र विभागबाट आफ्नो पहुँच दक्षताको कारण बाट अस्पताललाई समय समयमा पर्ने जुनसुकै समस्या पनि समाधान गर्न डा.रोशन न्यौपाने प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै साथै रचनात्मक कार्यमा लाग्ने यो अवसर मेरो जीवनको महत्वपुर्ण समय सम्झेको छु । (रेग्मी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुन् । अस्पतालको स्वामित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा अस्पतालमा नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ । )